Usabhadharira Direct Direct Zvinyorwa | Martech Zone
Vazhinji venyu munoziva kuti ini ndakabva kwakananga tsamba yekumashure. Nepo tsamba yakananga yakaratidza kudhura nekudzora kuderera kana ichienzaniswa kushambadzira kwepamhepo, ichiri chiteshi chinoshanda. Tiri kuona yakanaka yekudzosa mwero mubhizimusi reB2B - iro rakasiya zvakanyanya tsamba dzakananga. Tsamba yakanangana nevatengi inoenderana nevatengi ichiri indasitiri hombe, zvakadaro.
Nhasi, ini ndakagamuchira matatu akafanana zvidimbu mubhokisi rangu retsamba rakanyorerwa kune imwecheteyo chaiyo kero. Iyo yakanaka yakapetwa pasuru iyo yakanyatsogadzirwa nevanhu veVictoria Chakavanzika. Rudzi rwevechidiki, Pink, inonyanyo kufarirwa nevakadzi vechidiki uye mwanasikana wangu ari pane yavo yekutumira tsamba. Nehurombo zveVictoria Chakavanzika, zvakadaro, chirongwa chavo chakanangana netsamba hachisi kuita basa rakanaka pakubvisa mushandirapamwe. Isu takagamuchira zvidimbu zvitatu pakero yakafanana. Vaviri vakanyorerwa kupereterwa kwakasiyana kwezita remwanasikana wangu uye rimwe rakanyorerwa ini… handina zano rekuti nei.
Uku kukanganisa kunodhura. Iyo dhatabhesi inoshandiswa kumishandirapamwe iyi inogona nyore kumhanyisa kuburikidza nesoftware iyo yaizoona kuti chidimbu chinotumirwa kumunhu mumwe chete pakero. Pamusoro pezvo, inogona kutosanganiswa nedatha revakadzi kuti ndibvise zvachose kubva pakutumira.
Kana iwe uri kuronga yakananga mail mushandirapamwe, ramba uchifunga kuti zviri mukunakisisa kwemamwe ma agency kuchengetedza mavhoriyamu kumusoro. Nehurombo, izvo zvinofambisa kudzoka kwako pane yekudyara uye ekupindura mitengo pasi zvisiri zvekunyepa. Chingave chihombe mushandirapamwe pano unogona kutaurwa seumwe usina kuita zvakanaka. Ita shuwa kuti dhatabhesi rako rakapetwa usati watumira uye bvunza yako agency kana vachida kudzorera chero zvidzokororo kana zvidimbu zvakadzorerwa.
Tags: kudzikisiramail yakanangapingichakavanzika
Ndiani Anotarisa kune Banner Ads
Jun 25, 2013 pa11: 42AM
Izvi zvinogona kunyanya kudhura kune iye chaiye mutengesi - ivo vanowanzo tumira makuponi ezvigadzirwa zvemahara netsamba. Panzvimbo pechinhu chimwe chete, sezvazvinofanirwa kuve zvakagadzirirwa, mwanasikana wako anogona kuunganidza pazvinhu zvitatu zvemahara vachikanganisa kukanganisa kwavo. Yakanaka kwaari - yakaipa kune yavo yepasi mutsetse. (Pun zvisingaite asi zvakasara zvekupenga.)